အပတ်စဉ်အကြားအမြင်ရ Tarot ခန့်မှန်းချက်မေလ 28 - ဇွန်လ 4, 2017 "ဟု New အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန" - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > အပတ်စဉ်အကြားအမြင်ရ Tarot ခန့်မှန်းချက်မေလ 28 - ဇွန်လ 4, 2017 "ဟု New အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန"
Megan မေလ 26, 2017 ဗီဒီယိုများTagged 2017, Fore သွန်း, forec ..., ယေဘုယျ, ဇွန်လ, ဇြန္လ 2017, မေ, မေလ 2017, အဘိဥာဏ်, စာဖတ်ခြင်း, Taro, tarot, tarrot, အပတ်စဉ်ထုတ်, အပတ်စဉ်အကြားအမြင်ရ Tarot ခန့်မှန်းချက်မေလ 28 - ဇွန်လ 4a Comment ချန်ထား ဇွန်လ 28,4"ဟု New အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန" - အပတ်စဉ်အကြားအမြင်ရ Tarot ခန့်မှန်းချက်မေလ 2017 အပေါ်
ဇွန်လ 28,2- ဤမေလ 2017 ၏တစ်ပတ်အထွေထွေအဘိဥာဏ် tarot ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
* Reiki အစည်းအဝေးများ
* Group မှသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအတန်း
* ငါ့အ Tarot သတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ
သငျသညျဗီဒီယိုသည်သင်၏အတွက် box ကိုမှကယ်နှုတ်ခံရဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်လျှင် Subscribe ပေးပါ။
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/suzannebeandivinetarot?ref=hl
ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုများဝိညာဏကြီးထွားသို့ယေဘုယျထိုးထွင်းသိမြင်မှု, အနာဂတ်အလားအလာများနှင့် tarot မှာ In-depth ကိုကြည့်ပေးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစာဖတ်ခြင်းကလူသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဘဝများကိုသို့ သာ. ကြီးမြတ်မေတ္တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းရွေးချယ်မှု, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်, များစွာသောစေရန်ခွင့်ပြုစိတျဓာတျကနေအလိုအလျောက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်တအဘိဥာဏ် tarot စာဖတ်ခြင်း, ဗေဒင်ဆရာများနှင့်ကလူတစ်ဦးထက်ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပိုမိုချမ်းသာဘဝအသကျရှငျကကူညီရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူကို Reiki မာစတာမိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးရန်, လူတွေသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်ကိုအဖြေကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့အားမေတ္တာနှင့်အလင်း၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ !!!